Dhulka soo “Adigu ma lihid” | allsanaag
Dhulka soo “Adigu ma lihid”
Ilbaxnimada reer Maakhir iyo sida ay u jecel yihiin horomarka Soomaaliyeed.
Degaano badan oo ka mid ah Soomaaliya, maanta waxa xoog loogu haystaa dhulkii ay dawladda Soomaaliyeed ay gaarka u lahayd oo ka wada dhaxaysay guud ahaan umadda Soomaaliyeed, Degaano kale waxa xoog lagu haystaaa dhul iyo beero ay gaar u lahaayeen qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed oo xoog looga qabsaday . Degaano kale sida caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho , markii Mashaariicdii Soomaali oo dhan loogu talo galay in laga hirgeliyo in iyaga si qabyaaladaysan loogu soo qaraabo kiilay oo lo wada leexiyey wixii umadda Soomaaliyeed ka dhaxaysay Muqdisho sida mashaariicdaTurkiga Soomaalida oo dhan ugu deeqay . waxa dhacday in dadkii mashaariicdan sida eexda ah loogu keenay in iyaga Guutooyin ciidamo ah looga ilaaliyo inay dhibaateeyaan dhismayaashii loo dhisayey iyo in laga ilaaliyo inay dilaan ama qarxiyaan Shisheeyihii mashaariicdan madaxda ka ahaa.
Laakiinse Bulshada reer Maakhir oo dawlad buuxda oo la aqoonsan yahay lahayd, ka hor maalintii Soomaali inteeda kale xornimada qaadatay 1960 ilaa qarnigii 12aad, iyagu waxay muujiyeen ilabaxnimo iyo macnaha dawladnimo wuxuu yahay
Maanta labada mashruuc oo ka mid ah mashaaeriicda ugu waaweyn ee laga hirgelinayo dalka Soomaaliya ayaa dawladda Puntland iyo madaxweynaheeda Dr. Cabdiweli Gaas waxay ka hirgelinayaan gobolka Sanaag. Labadan Mashruuc ayaa kala ah Jaamacadda Maakhir iyo jidka Ceel daahir iyo Ceerigaabo
Labada Mashruuc waxa ka dhigay inay hirgalaan oo si xawaare ku socdaan , waa bulshada degaanka oo yar weyn qayb ka ah in mashaariicdan horumarineed ay ka hirgalaan gobolka
Tusaalaha ugu fiican waa sawirka hoose oo ah gudoomiyiha gobolka Sanaag ee Dawladda Puntland Maxamuud Ciyoon, wuxuu ku sugan yahay magaalada Cawsane ee gobolkaas, oo dhowaan jidka Ceel daahir iyo Ceerigaabo soo gaarayo magaalada Cawsane . Gudoomiyihu isaga oo aan guutooyin ciidamo ah soo kaxaysan oo xoog wax ku muquunin, ayuu isaga oo keligiis ah waxa uu ka qayb qaadanayaa banaynta halka jiidku marayo. Dadkii danyarta ahaa buulkii ay deganaayeen in la dumiyo waxay ka doorteen danta guud ee Bulshada
Guddoomiyaha gobolka Sanaag ayaa subaxnimo hore kala qayb galay masuuliyiinta reer Cawsane oo jidka magaalada dhex mara ka bannaynaya dhismayaasha sharci darada ah ee bushashka iyo sandaqadaha , si ay ugu gogol xaadhaan wadada oo aan sidaas uga fogeyn magaalada Cawsane.
Madaxa Magaalada Cawsane Daahir Ciise Warsame ayaa guddoomiyaha u sheegay in bulshadu si rabitaan ah ugala shaqeeyeen duminta iyo furfurida dhismayaasha wadada hareereheeda ah, taasina waxay ku tusaysaa sida dadku diyaar ugu yahay wadadaas.
Waxa xusid mudan in dhowaan ceelbiyood laga bilaabay degaanka Cawsane , kaas oo wax weyn ka tari doona shaqada dhismaha wadada .
Bulshada reer Sanaag ayaa u hanweyn hirgelinta wadadaas , Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas na uga mahad celiya sida uu ugu dhiiradey dhismaha wadadaas
← Dabo dhilifyada Itoobiya Musuqmaasaqa Xasan Culusoow →